Apple waxay leedahay in kabadan 1.000 bilyan aalado firfircoon oo suuqa yaala | Wararka IPhone
Apple waxay leedahay in kabadan 1.000 bilyan aalado firfircoon suuqa
Shirka uu Apple qabtay shalay isagoo soo bandhigaya natiijooyinka maaliyadeed, iyo kahor su'aasha suxuufiyiinta, Apple waxay qaadatay fursad ay uga warbixiso xaqiiqooyinka qaarkood, sida mida hada iyo kadib iibka rubucii lasoo dhaafay, shirkada fadhigeedu yahay Cupertino. wuxuu leeyahay in kabadan 1.000 bilyan oo qalab firfircoon adduunka oo dhan. Qalabka firfircoon waxaan ka helnaa Mac, iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch iyo Apple TV dhammaan noocyada kala duwan ee suuqa soo gaarayay sannadihii la soo dhaafay.
Intii lagu gudajiray rubucii ugu dambeeyay ee 2015, Apple waxay ku guuleysatay inay wareejiso ku dhowaad 100 milyan oo qalab cusub loo qaybiyey sida soo socota: 74,7 milyan oo iPhone ah, 16,1 milyan oo iPad ah, iyo 5,3 milyan oo Mac ah. In kasta oo hoos u dhac weyn ku yimid tirada iibka iPad-ka isla markaana waxoogaa ka hooseeya arrinta Macs-ka, haddana unugyada iPhone ee la iibiyey waxay ku sii jiraan si la mid ah sidii rubacii hore, kaasoo muujiyey calaamadaha digniinta ah.
Kordhinta ay Apple noo isticmaali jirtay imika isku mid ma aha, mar dambe ma sii korayso, ugu yaraan rubuckan u dambeeya, taas oo tilmaami karta in Apple waxay hadda gaadhay saqafka iibka ee qalabkeeda calanka, Markaad tixgeliso Shiinaha, oo ka mid ah suuqyada ay xoogga saarayeen sannadihii la soo dhaafay, waxay joogsanaysaa inuu noqdo mashiinka dhaqaale ee uu ahaan jiray illaa hadda.
Hadda Apple ujeedkiisu waa inuu diirada saaro Hindiya, taas oo ah oo ay deggan yihiin 1.200 milyan Iyada oo ay sii kordheyso dhaqaalaha la tartamaya, waa gabadha xigta ee quruxda badan ee Apple, oo halka mar haddii wax laga beddelo shuruudaha shirkadaha shisheeye, Apple ay horay u soo bandhigtay dhowr mashruuc oo lagu bilaabayo furitaanka Dukaankiisa Apple, iyada oo laga tagayo kuwa iibiya ee ay isticmaaleyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay leedahay in kabadan 1.000 bilyan aalado firfircoon suuqa
Calaamado badan oo muujinaya in WhatsApp noo saamaxeyso inaan dirno dukumiinti